Ngwanrọ njikwa mwepụta | Motadata
Ngwa njikwa mwepụta
Jiri Ntụkwasị Obi Bugharịa
Nyefee nkwalite sọftụwia na akụrụngwa IT gị iji jeere ndị ahịa gị ozi nke ọma n'enweghị ọgba aghara, igbu oge na ọnụ ahịa ọnụ ahịa.
Jiri wepụta atụmatụ ọhụrụ
Ọsọ na Izi Ezi
Mee ka nghọta dị elu na mwepụta gị site na iji njikwa mwepụta agbakọtara ITIL anyị nke na-ebelata ihe egwu n'ozuzu ya na ntinye ọkwa amamihe.
Jiri atụmatụ wee soro mpụta Nkwanye ọkwa n'amamihe
Kwe ka onye njikwa ntọhapụ gị ka ọ na-ahụ anya na-ahazi usoro ọ bụla na usoro ntinye.
7 nke akọwara ụzọ
Ọkwa nkwado raara onwe ya nye
Iwu omenala maka ọkwa ọ bụla
Eba aba arụ
Jiri usoro mbunye akpaaka Azụmahịa
Tọọ usoro ọrụ dabere na mmemme iji megharịa usoro ka ị na-ejikwa mwepụta.
Zipụ ọkwa email
Kenye onye ọrụ nka
Mmehie akwụkwọ ntuziaka belatara
Wepụta mpụta mbụ dabere na Ụdị mwepụta
Ọ bụghị ntọhapụ niile bụ otu. Kenye ụzọ ntọhapụ dabere na ngalaba ntọhapụ.
Mepụta mwepụta ọkọlọtọ
Mepụta nnukwu mwepụta
Mepụta mwepụta ihe mberede
Jiri jikwaa ihe egwu nke mgbanwe Ọchịchị Kwesịrị Ekwesị
Kwado ndị njikwa gị ka ha rụọ ọrụ na mgbanwe na mbugharị na nghọta zuru oke.
Dekọọ oge akwadoro maka mwepụta
Mepụta atụmatụ nrụpụta na nnwale
Kenye ndị nwere oke aka maka ọkwa ọ bụla
Mepụta aza ajụjụ
Njikwa Mwepụta agbakwunyere na atụmatụ maka ibelata ihe ize ndụ jikọtara na mgbanwe na ntinye.
Njikọ na modul ITSM
Njikọ miri emi na modul ITSM ndị ọzọ dị ka ihe omume, mgbanwe, nsogbu, wdg.
Akụkọ mgbanwe emere na arịrịọ mwepụta yana ozi onye ọrụ.
Sochie Ozi Akụrụngwa
Enwere ike ijikọ arịrịọ ntọhapụ na CI na CMDB.
Imekọ ihe n'ime ya
Wepụta mkparịta ụka site n'aka ọtụtụ ndị metụtara maka otu mwepụta.
Akụkọ di elu
Akuko mara ọkwa nke ọkwa maka mpụta arụ ọrụ yana mechiri emechi nke ejiri ụbọchị chịkọtara.
Mepụta arịrịọ ntọhapụ tupu oge eruo site na ndebiri akọwapụtagoro.
Ụdị mwepụta omenala
Hazie fọm ntọhapụ site na iji dọrọ na dobe ihe nrụpụta.
Ihe kpatara mwepụta ndekọ
Mepụta ma dekọọ ihe kpatara mwepụta gị.
Iwu mwepụta omenala
Tọọ iwu mpaghara maka ọkwa mwepụta ọ bụla.
Ihe ngwọta njikwa tiketi
Kedu ihe dị iche n'etiti mgbanwe na njikwa ntọhapụ?
Isi ihe dị iche n'etiti njikwa mgbanwe na njikwa ntọhapụ bụ na njikwa mgbanwe na-enye ụzọ mbelata ihe ize ndụ. N'ihi na mmetụta nke mgbanwe nwere ike gbasaa ọtụtụ ngalaba na ngalaba azụmahịa, a na-emepụta usoro njikwa mgbanwe iji belata ma ọ bụ kpochapụ ọgbaghara. N'ihi ya, njikwa mgbanwe bụ usoro atụmatụ karịa.
Nlekọta mwepụta bụ isi na-emetụta ka ewepụtara ma ọ bụ nkwalite ga-esi hazie na ibunye ya. Ọtụtụ n'ime usoro ndị metụtara usoro njikwa ntọhapụ na-arụ ọrụ karịa iji nye ọrụ ndị ọrụ njedebe ngwa ngwa na mgbe niile.
Kedu ihe dị iche n'etiti ntọhapụ na ntinye?
Ntọhapụ bụ ụdịdị otu ma ọ bụ karịa ọhụrụ ma ọ bụ emelitere ọrụ ma ọ bụ akụrụngwa ọrụ etinyegoro na gburugburu ebe obibi n'ihi otu mgbanwe ma ọ bụ karịa. Ndị ọrụ nwere ike ị nweta ọrụ na atụmatụ ma ahapụchara ya.
Gburugburu ebe obibi bụ akụkụ nke akụrụngwa IT nke ejiri maka otu ebumnuche, na mbugharị bụ usoro ibufe sọftụwia site n'otu ebe a na-achịkwa gaa na nke ọzọ.
Nkwenye azụmahịa bụ ihe dị mkpa dị iche n'etiti ntinye na ntọhapụ. Nbunye anaghị apụta mgbe niile na ndị ọrụ nwere ohere ịrụ ọrụ. Ụfọdụ ụlọ ọrụ ga-ahapụ n'otu oge ka ha na-ebuga na mmepụta. Ndị ọzọ ga-ahọrọ ichere, na-ebute njirimara ọhụrụ a na-emepụta mana ndị ọrụ adịghị ya ruo mgbe nzukọ ahụ kpebiri.
Ya mere, njikwa ntọhapụ bụ ihe gbasara azụmahịa karịa nke teknụzụ. Nke a bụ n'ihi na enwere ike jikọta mkpebi nhazi oge ntọhapụ na atụmatụ azụmahịa n'ihe gbasara njikwa ego.
Kedu ọrụ dịịrị onye njikwa ntọhapụ?
Onye njikwa ntọhapụ na-ahụ maka nhazi na ilekọta ntinye nke mwepụta iji nwalee na mmepụta gburugburu. Isi ọrụ ya bụ ịhụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke gburugburu ebe obibi na ịhapụ ihe ndị kwesịrị ekwesị.
Ọrụ ndị ọzọ na-agụnye ịmepụta na ibipụta atụmatụ ntọhapụ na inye oge maka ntọhapụ na-ewu na ule, ntinye, nkwado ndụ mmalite, na mmechi, ijikwa usoro ihe omume, na ikenye ihe onwunwe na-emekọrịta ihe na ịkparịta ụka n'òtù dị iche iche iji na-esochi ọtụtụ oge ntọhapụ, na-eduzi nyocha dị oke mkpa. nke ntọhapụ na mgbanwe nkwekọrịta niile, na-esochi mwepụta niile etinyere na nke a ga-emejuputa ya, na inye ọzụzụ kwesịrị ekwesị nye ndị otu njikwa ntọhapụ.
Kedu omume kacha mma njikwa ntọhapụ?
Usoro njikwa ntọhapụ ITIL kachasị mma gụnyere nyocha na ijikọ nyocha nke usoro njikwa ntọhapụ dị ugbu a, ime ka usoro njikwa ntọhapụ ọhụrụ dị mfe, na-emepe usoro ndụ njikwa ntọhapụ, na-emezi usoro dị arọ iji mee ka mwepụta dị ngwa ngwa, na-ekepụta akwụkwọ dị nkenke ma dị irè nke nkwekọrịta kwadoro n'ime. okirikiri ntọhapụ ọ bụla, na-emepe akụrụngwa ahaziri ahazi site na iji usoro njikwa nhazi, tụọ arụmọrụ yana njikwa ntọhapụ KPI, na inye ọzụzụ na imepụta ogbako mmata maka otu njikwa ntọhapụ.